Fotoana famakiana: 5 minitra Tendrombohitra mahatalanjona, lohasaha mamelana, riandrano, farihy, sy ny biby dia, Tranon'i Eoropa amin'ireo tahirin-javaboary tsy hay hadinoina indrindra eto an-tany. Mandany ny tany maitso midadasika izay maniry eo amin'ny lohataona, 5 of the most beautiful nature reserves in Europe are protected national parks that welcome travelers from…
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny sasany amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Eropa dia tsy voavidim-bola ary mora azo. Na izany aza, a trip to Europe can get quite expensive if you don’t plan in advance. While most European capitals will stretch your travel budget, there are quite a few places…
Fotoana famakiana: 4 minitra Traveling no farany traikefa nahafinaritra, fa tokony hanao izany maimaim-poana entana, indrindra ho an'ireo layovers na raha efa maimaim-poana fotsiny ny andro any amin'ny iray amin'ireo tanàna malaza Alemaina. Izahay dia manana ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ireo toerana enta-mavesatra sisa tavela any Alemana mandritra ny telo amin'ny…
Fotoana famakiana: 5 minitra Ny fotoana farany tonga – na ianao vao diplaoma oniversite, sasin-tenin'ny avy no ho an'ny isan-taona vakansy, na dia nanapa-kevitra fa ny fitaoman'ity tany Tsidika tsy ho hita, ianao efa nifidy ny handeha Eoropa lamasinina. Tena tantaram-pitiavana hevitra, a trek traveled by…
Fotoana famakiana: 5 minitra Raha vao nanomboka ny diany mikasa amin'ny alalan'ny Bavaria any Alemaina, ianao dia mety mieritreritra ny faritany haleha izy. Azo inoana fa ianao no tena tototry ny, noho ireo porofo mahagaga isan'ny toerana ny fitsidihana. Plus, tianao antonona azy rehetra ao anaty 10 days itinerary…
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny fitsangatsanganana an-tampony ho an'ny laharana farany any Berlin dia tsy maintsy atao na dia eo aza i Berlin izay toerana mahafinaritra hitsidihana azy! Efa ampy ny zavatra tena nahasarika tany Alemaina renivohitra mba hiaro anao nonina nandritra ny andro. Na izany aza, day trips from Berlin to the neighboring towns and countryside can…
Fotoana famakiana: 3 minitra Eoropa no tena tsara toerana fihaonana maro samy hafa kolontsaina - ary culinary fomba amam-panao. Firenena rehetra manana ny mampiavaka, izay mitaona ny mpitsidika tsara ho amin'ny tantara sy ny zavatra hafa rehetra izany manome. Ary ny any amin'ny tany sasany, izany dia midika ihany koa flavorful zava-pisotro! Those of…
Fotoana famakiana: 3 minitra Local zava-mamy avy amin'ny karazana maro manerana an'i Eoropa. Firenena sy ny faritra rehetra manana ny kely Fifaliana mirehareha izy ireo mba hanolotra. Ho mpizaha tany amin'ny hanitra nify, tsy misy na inona na inona mahasarika kokoa noho ny vaovao momba ny nandeha tiany. Ireto ny ambony 5 tsara indrindra…